Edinga iodine amalungiselelo? Abakushoyo mayelana umthengi Izibuyekezo? "Iodine-Active" - indlela kufanele zisetshenziswe? Izimpendulo zale mibuzo neminye izokwethulwa ngezansi.
Izingxenye ezisemqoka nangohlobo izithasiselo yemvelo
Umuthi 'Iodine-Active ", intengo iluphi okuzoxoxwa ngalo kamuva esihlokweni, angathengwa ngasiphi ekhemisi. It iza ngesimo amaphilisi omhlophe nxazonke, futhi liqukethe zingxenye ezilandelayo: skimmed ubisi powder, futhi monohydrate lactose njengoba monohydrate yodkazeinom calcium stearate iodine.
Ngo iphakheji ekhiqizwa kubhekwe ibhekwa wezokudla? Abakushoyo ngalokhu impendulo? "Iodine-Active" okuthengiswa ibhamuza amaphakethe of amaphilisi 10, okuyinto Agcwele amakhadibhodi amabhokisi.
isinyathelo kwemithi Bud
Ngokusho ochwepheshe, lesi sidakamizwa "Iodine-Aktiv 200" yakhelwe ukwenza i yokuntuleka iodine emzimbeni womuntu.
Lapho ukwehluleka esiyinhloko ingxenye isici olucutshungulwayo Bud egxile ngokuphelele, futhi lapho isamba ngokweqile - okukhipha ngokudlula yegilo. Yini eyabangela mphumela imithi? It is olunikezwa ikhono element eziyisisekelo kokuba wajinge wanamatsela kusukela amaprotheni ubisi. Le nqubo kuthonywa enzyme isibindi ezikhiqizwayo ukuntula lapho iodine. Uma isici wathi elikhona emzimbeni womuntu imali eyanele, ukukhiqizwa kwe-enzyme ethile ingekho kanye ketshezi asebenzayo ihlumela hhayi angena igazi ekusakazeni eluhlelweni kanye uboniswa ngokwemvelo.
Yiziphi izindawo esivela okufakiwe ehilelekile? Abakushoyo obakhathalelayo lwakhe lwezokwelapha? "Iodine-Active", noma kunalokho base Ngaphandle kwezinto zalo ezibonakalayo, kubalulekile ukuze ukukhiqizwa kwama-hormone yegilo indlala, kanye nokusebenza kwawo okuvamile futhi ungaphazanyiswa.
Kuyinto imfihlo ukuthi iodine iye bahileleke ukulawulwa izinqubo umzimba (kufaka umzimba amaphrotheni, amafutha kanye carbohydrate), kanye isimiso sezinzwa, esimiso senhliziyo nemithambo yegazi, wokuzala kanye nezindlala mammary. Ngaphezu kwalokho, lesi sici kubalulekile ekutfutfukiseni evamile nokukhula kwengane.
Kuyini izidakamizwa emangalisayo "Iodine-Active"? Imiyalelo, amazwana baphikisa ngokuthi zokwelapha zanamuhla is a ejenti eyenza imithi esetshenziswa kabanzi ekulweni eziningi izifo yegilo ezahlukene. futhi lisetshenziswa ekwelapheni lag nokuhlakanipha ku ekukhuleni kwengane.
Ngokuvamile "Iodine-Aktiv" Izithako elibekelwe abesifazane ngesikhathi sokukhulelwa futhi ngenkathi ibele. Awukwazi ukwenza, futhi labo bavezwa emisebeni ngaphandle kosizo imithi.
Indawo nezindawo zemvelo abanamusa futhi kungase kuphakame kubhekwe ethola izindlela.
Njengoba kushiwo ngenhla, ne kusilela iodine ibhekwa wezokudla kunalokho matasa ngokushesha ku kwegazi. Uma umzimba womuntu ngokweqile lapho lesi sakhi, awusebenzi buthelela indlala yegilo, futhi uboniswa ngendlela evamile. Ezinye izimpahla pharmacokinetic we ejenti kungukuthi ezichazwe imiyalelo enamathiselwe.
Izinkomba yokwamukelwa bada
Ukulungiselela "Iodine-Go" limelela kuyithuluzi eliphumelelayo, okuboniswe ngoba:
Gcwalisa Micronutrient kwamaphutha (iodine) emzimbeni womuntu.
Ukunciphisa ingozi imihlola ehlukahlukene sokugembula elihlobene ne ukuntula iodine.
Uvala ukusetshenziswa ihlumela
I-ejenti kuncike ezithaka imithi cishe ayinakho Izimo. Wayengahlezi kuphela ebekiwe lapho i hypersensitivity ngabanye. Kufanele kuqashelwe ukuthi le ekwakhiweni kuyinto engathandeki ukuthatha lapho ngokweqile iodine i umzimba futhi ngo parallel nezinye imithi equkethe lokhu sakhi uqobo.
Indlela "Iodine-Active"? Izindlela kanye umthamo
Bud ethola indlela kubhekwe ngokuningiliziwe imiyalelo enamathiselwe. Nokho, kufanele aqoke kuphela udokotela abanolwazi, ikhumbula zonke izici ngamunye isiguli.
Ngokusho imibiko wezazi, lesi sidakamizwa "Iodine-Active", umthamo incike yobudala isiguli, inikezwa ikakhulukazi kubantu abadala futhi izingane ezineminyaka engu-14. Lesi sigaba imithi isiguli Kunconywa ukuthatha 1-2 amaphilisi usuku ngezikhathi zokudla.
Kufanele kuphawulwe ukuthi kwezinye izimo, i-iodine amalungiselelo kungenziwa eyabelwe izingane ezincane, kuhlanganise izingane ubuhlengikazi. Kulesi simo kufanele zithobele ngemithamo nsuku zonke umuntu elandela:
for izinsana izingane ezingaphansi konyaka owodwa - 50 mg;
izingane ezincane (ie kuze kufike ku iminyaka eyisikhombisa) - 90 g;
ingane iminyaka 7-14 - 120 mcg;
abadala nentsha kusukela engu-14 - 150 mg;
ukufukamela abesifazane nabesifazane isikhundla - micrograms 200.
Kuzo zonke izimo, ukuthatha amaphilisi kufanele kube esidlweni kanye ngosuku.
Imiphumela emibi ngemva kokungenisa Bud
Wake wayisebenzisa yini ikhampasi ukuthi bayavuma by ukuqashwa izimali? Kuthiwani lo mbiko umthengi Izibuyekezo? "Iodine-Active" kakhulu kuyaqabukela kunomthelela ukuthuthukiswa nemiphumela engemihle. Kuphela ngezinye izikhathi ekusetshenzisweni yayo iziguli eqoshiwe komzimba (ngokuvamile in abantu beyizidlova).
Isikhathi eside ebulilini iodine amalungiselelo kungase kube nomthelela hyperthyroidism ukuthuthukiswa yodindutsirovannogo. Kufanele kuphawulwe ukuthi ngemithamo amacala olulodwa okukhulu kwalesi microcell (engaphezu kuka-1000 micrograms ngelanga) avuse goiter kanye hypothyroidism. Isithombe basemtholampilo izimo zokucabanga okubangelwa isifo siqukethe izici ezifana:
lwamafinyila ulwelwesi staining ebumnyameni.
Ukwelashwa nokuvikelwa anomalies enjalo simiswe ngalendlela lelandzelako: lavage isixazululo esiswini ehlanganisa isitashi kanye amaprotheni, noma isixazululo 5% sodium thiosulfate. Ngaphezu kwalokho, isikhundla ukwelashwa posindromnaya ukuthi luhlose ukubuyisela amanzi kanye electrolyte ibhalansi. Uma kudingeka, ngokumelene isisulu eyenziwa anti-ukushaqeka mcimbi.
Lapho ezingamahlalakhona ukudakwa uhlobo kudinga yokukhansela ngokushesha ukwelashwa iodine izidakamizwa.
Yodindutsirovannogo yokwelapha i-hypothyroidism eyenziwa ukwabela hormone yegilo umzimba ngaphambi kokuba izinze. Ngokuphathelene ekwelapheni i-hyperthyroidism yodindutsirovannogo, ke Kwenziwa ngokusebenzisa yokwelapha thyreostatic ozinikele.
amafomu Soft of ukweqisa izidakamizwa ukwelashwa okukhethekile asidingi.
With ukuthuthukiswa thyrotoxic crisis eyenziwa labagula kakhulu, kanye plasmapheresis futhi yegilo.
Yeka ukuthi kuyinto ibhekwa "Iodine-Active"? Intengo yale imali incike inani amaphilisi e iphakheji futhi cishe ruble 170 per amaphilisi 80.
Iziguli bathi isidakamizwa kwamukeleka kahle, kuhlanganise ngesikhathi sokukhulelwa. Nokho, abanye aveze ukuthi ngemva kokuba enqobe amaphilisi ukunambitha iodine ivela emlonyeni, kanye palpitations inhliziyo zenzeka.
Njengoba for ochwepheshe, bexabana ukuthi kuyithuluzi eliphumelela kakhulu ukuthi ekahle zokuvimbela iodine ukuntula.
Kungenzeka yini ukuba umuntu aphuze nomchamo? Umchamo: ukubuyekezwa kodokotela kanye neziguli
Ongakhetha eziningana indlela ugaye ikhofi green